We Kupa zvachose muitiro mhinduro
Organic fetiraiza kugadzirwa mutsaraOrganic fetiraiza kugadzirwa mutsara
Zhengzhou Yizheng Heavy Machinery Equipment Co., Ltd. iri kumadokero kwemaindasitiri paki yeZhengzhou, dunhu reHenan, inonyanya kutsvagisa nekusimudzira tekinoroji yekuchengetedza ezvekurima, iko kutsvagisa nekusimudzira uye kugadzirwa kwemidziyo yekushandisa marara, BB fetiraiza yakazara seti yemidziyo, organic fetiraiza michina, organic fetiraiza yekugadzira mutsara midziyo yekutsvaga uye kusimudzira uye kugadzirwa. Tine simba rekutsvagisa nekusimudzira kugona uye simba rekugadzira. Kupa vatengi neyakagadziriswa dhizaini, organic fetiraiza michina yekugadzira, kuisa, kuyedza, kutsigira imwechete-yekumira yakazara sevhisi.
Ipa Iyo Yose Fertilizer Kugadzira Kudyara
Makemikari fetiraiza ari kugadzirwa zvakagadzirwa kubva kuzvinhu zvisina kujairika, zvinhu zvinopa zvinhu zvinovaka muviri zvekukura kwezvirimwa nemaitiro epanyama kana emakemikari. Iyo Nutrients yeChemical Fertilizers Makemikari mafetiraiza akapfuma mune zvitatu zvakakosha zvinovaka muviri zvinodiwa kune pl ...
Mamiriro ekudzora kwe organic organic fetiraiza kugadzirwa, mukuita, kudyidzana kwepanyama uye kwehupenyu zvivakwa mukuita kwekugadzira manyowa. Kune rimwe divi, mamiriro ekudzora anopindirana uye akabatanidzwa. Kune rimwe divi, akasiyana mavhiri akasanganiswa pamwechete, nekuda kwe div ...
Mumakore achangopfuura, nekuvandudzwa kwetekinoroji yekurima yefungi inodyiwa, kuwedzera kuri kuwedzera kwenzvimbo yekudyara uye kuwanda kwenzvimbo dzekudyara, howa hwave chinhu chakakosha chemari mukugadzirwa kwekurima. Munzvimbo inokura howa, marara mazhinji igen'a ...
Usati wasarudza muchina wekuomesa fetiraiza, unofanirwa kutanga waongorora zvido zvako zvekuomesa: Zvinongedzo zvezvimedu: Ndezvipi zvinhu zvemuviri kana zvanyorova kana kuoma? Chii chinonzi granularity kugovera? Inokuvadza, inopisa, inoparadza kana inopwanya? Maitiro anoda ...
Kana pamba pakagadzirwa fetiraiza, manyowa emanyowa anokosha. Kuisa mupfudze inzira inoshanda uye ine hupfumi yekurasa marara ezvipfuyo Kune matatu marudzi emurwi mhando: yakatwasuka, semi-gomba, uye gomba Yakarurama mhando Inokodzera kupisa kwakanyanya, mvura, hunyoro hwakanyanya, yakakwira mvura t ...